Mayelana NATHI - Huaian Enyuan Tourist Products Co., Ltd.
Sikudalele imikhiqizo enhle
Singabantu i-Enyuan Travel Products Co, Ltd i-Huaian City, isifundazwe sase-Jiangsu, e-China. Kuyibhizinisi elikhulu kakhulu eligxile ekukhiqizeni nasekuthengiseni imikhiqizo yokunakekela ngomlomo. Le nkampani yasungulwa ngo-2017. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwemithathu yokusebenza kanzima nentuthuko, isivele inamandla amakhulu. Manje inethimba lokukhiqiza elinekhono futhi elinekhono, futhi imikhiqizo ehlukahlukene ithunyelwa emazweni aphesheya kwezilwandle. Unengcebo yolwazi lokuhweba lwangaphandle nelabhulali yomkhiqizo. Imikhiqizo yenkampani ifaka zonke izinhlobo zamabhulashi wamazinyo epulasitiki, izixubho zoqalo, izisuli zolimi, amabhulashi okuvimbela ukwelashwa, izixubho ezilahlwayo, njll.
Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-5,000, lapho indawo yokwakha ingaphezu kwamamitha-skwele angama-4,000. Kunabasebenzi abangaphezu kwekhulu. Le nkampani njengamanje inemishini yokukhiqiza engama-40 yamabhulashi amazinyo. Imishini yokukhiqiza ibhulashi lamazinyo engamashumi amathathu nochungechunge lwezinsiza zokukhiqiza zokuphepha ezihlobene. Kwakhiwa imigqa eminingana yokukhiqiza. Ukukhiqizwa kwamabhulashi wamazinyo nsuku zonke kungafinyelela ku-200,000. Umphumela waminyaka yonke wamabhulashi wamazinyo aqediwe ufinyelela kwizigidi ezingama-50.
Kusukela ngo-2018, ephendula ukuvinjelwa kwepulasitiki yaseYurophu, inkampani yethu ilungise ukuqondiswa kwemboni yangaphakathi yenkampani ngesikhathi, igxile kumabhulashi wamazinyo enziwe ngemvelo. Le nkampani yaqala ukwethula umugqa wamazwe omhlaba wokukhiqiza wokuxubha ohamba phambili, futhi ivuselela njalo umshini futhi ilungise umugqa wokukhiqiza. Ukukhiqiza nje imikhiqizo engcono yomlomo. Eminyakeni emibili edlule, inkampani ikwazile ukukhiqiza izinhlobo ezingaphezu kuka-40 zamabhulashi wamazinyo woqalo namabhulashi okuvimbela ukwelashwa neminye imikhiqizo yamazinyo. Imikhiqizo ithengiselwa umhlaba wangaphandle futhi inqobile ngazwi linye ngamakhasimende. I-oda lonyaka lamabhulashi wamazinyo oqalo angafinyelela ngaphezu kwezigidi ezingama-20.
Le nkampani ibilokhu inamathele kwifilosofi yebhizinisi ye "emisha enengqondo, ikhwalithi kuqala". Sizibophezele ekukhiqizeni izixubho ezingcono zokusebenzela abathengi.
Sikudalele imikhiqizo enhle!